DVDFab u Mavericks, Beddelaan iyo Beddelaan DVD in kasta Video ama Device
> Resource > Mac > DVDFab Alternative for Mac (Yosemite ka mid ah): Beddelaan DVD kasta Video ama Dev
DVDFab waa qalabka DVD weyn in aad nuqulka, jeexid, iyo badalo DVD in videos kale ama qalabka la qaadi karo. Si kastaba ha ahaatee, dadka isticmaala badan imtixaanay ma la Mountain Libaaxa shaqeeyaan, inkastoo bogga internetka leeyahay sameeyaa. Sidaas halkan, inta badan waxaan ku talinaynaa a kale smart DVDFab u Mac (Mountain Libaaxa socon) si ay kaaga caawiyaan in aad guys badalo iyo badalo DVD in files warbaahinta kala duwan ee loo isticmaalo.
Taasi Wondershare Video Converter Ultimate for Mac -convert, gubi, oo nuqul ka DVD si fudud, si degdeg ah oo tayo sare leh. Sidaa daraadeed, si aad u MP4 badalo kartaa DVD cajalladaha aad, MKV, MOV, FLV, wmv, AVI, MPEG, VOB, DV, 3GP, DivX, MP3, OGG, regelingen, FLAC, WMA iyo wax kasta oo kale oo caan ah qaabab video / video. Sidoo kale, ISO iyo DVD gal halkan taageeray. Waa maxay dheeraad ah, ku dhowaad dhammaan aaladaha la qaadi karo oo caan ah ayaa lagu bixiyey halkan in ay oggolaadaan in aad si toos ah loogu badalo DVD ah ee loo maqli karo iyaga on.
Hadda, aan ka bilaabi si ay u bartaan sida loo badalo DVD la DVDFab kale oo ku xiran Mountain Libaaxa 10.8, iyo Mac OS X 10.11 (El Capitan), 10,10, 10.9, 10.8, 10.7, 10.6 iwm
1 Load files DVD in this kale DVDFab u Mac (El Capitan ka mid ah)
Marka aad u ordo, waxaa jira saddex isha ku interface ugu weyn, Beddelaan, Guba, oo Download. Garaacista "Beddelaan" tab ha kartaa in aad loogu badalo DVD iyo video files si kasta oo kale oo halkaan qaabab video. Sidaas, kaliya waxa guji geli interface howlgalka. Markaas, waxaad u baahan tahay in ay soo dhoofsadaan DVD faylasha aad adigoo isticmaalaya mid ka mid ah saddex dariiqo oo hoos ku qoran.
Riix ah "File" menu iyo dooran "DVD Load Files"
Ka dib marka aad is geliso DVD ah, double guji icon file DVD ee DVD drive ka dibna u jiidin app this. Wixii ISO files iwm, oo aad si toos ah ayaa sidoo kale iyaga jiidi karaan barnaamijkan.
2 Dooro qaab kasta oo aad rabto in aad
In ay leeg- ee kale DVDFab ee Mountain Libaaxa, waxaa jira a button hoos-fallaadh. Just waxa guji in ay doortaan dejinayo kasta oo aad rabto in aad ka format saarka suuqa kala dhisayaa-upka. Halkan, dhan loo jecel yahay qaabab, video, audio iyo xitaa qalabka iwm waxaa la siiyaa. Just xulo qaab ku habboon sida ay baahidaada. Haddii aad rabto in aad si loogu badalo DVD aallada qaar ka mid ah, kaliya aad u dooran kartaa model qalabka sida qaab wax soo saarka.
3 Beddelaan DVD tan u dhiganta DVDFab u Mac (El Capitan ka mid ah)
Guudmar saamaynta uu furmo suuqa Xiisaha Leh. Haddii aad raalli saamaynta tahay, waxaad bilaabi kartaa si loogu badalo iyo badalo DVD in qaabka aad rabto. Just ku dhufatey "Beddelaan" button in interface hoose-midig. Isla markiiba, waxaad ka arki kartaa bar horumarka. Marka ay gaadho 100%, waxay ka dhigan tahay diinta la dhammeeyo. Wakhtigan, waxaad ka heli kartaa files saarka galka wax soo saarka ah.
Talooyin dheeraad ah: In la badalo DVD ah ee loo maqli karo ee qalabka sida iPhone, iPad, iwm, waxaad u baahan tahay in ay soo dhoofsadaan DVD faylasha dooxay si Lugood u hagaagsan dambe qalabka Apple. Wixii qalab kale, kaliya iyaga wareejiyo via cable.